Indawo yokuhlala yaseThilina 1 - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseThilina 1
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguThilina
Chitha ubusuku kwikhaya lentsapho yasekhaya, kwigumbi elihle elinebhedi entle kunye negumbi lokuhlambela elilungileyo. Embindini wehlathi. Ukusuka kwiveranda yakho unokubona iinkawu emithini, uve izandi zehlathi kwaye ujabulele indalo entle ngelixa usonwabela irayisi yasekhaya kunye nekhari.
Unegumbi lakho, igumbi lokuhlambela elinamanzi ashushu, iveranda kunye nomnyango wabucala.
Isidlo sakusasa sifakiwe kwaye senziwe ekhaya kwaye sasekhaya.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ube nesidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa ngentlawulo eyongezelelweyo. Yonke into, ngokuqinisekileyo, intsha kwaye ilungiswe ngendlela yendabuko.
Indlu yam iphakathi kwendalo entle eluhlaza. Kuthe cwaka ngokumangalisayo. Kwigadi enkulu unokubona iinkawu, amabhabhathane amahle neentaka. Ngamanye amaxesha siyamangaliswa yindlovu xa kuhlwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Thilina
Ndingakhapha iindwendwe zam njengesikhokelo kuhambo nge-tuk-tuk yam. Uqhagamshelwano lunokwenziwa ngefowuni, ngokusebenzisa (Ifihlwe nguAirbnb) okanye nge-imeyile. Ekubeni uhlala kwam kunye nendlu yosapho lwam kuhlala kukho umntu ojikelezayo wokuhoya ishishini
Ndingakhapha iindwendwe zam njengesikhokelo kuhambo nge-tuk-tuk yam. Uqhagamshelwano lunokwenziwa ngefowuni, ngokusebenzisa (Ifihlwe nguAirbnb) okanye nge-imeyile. Ekubeni uhlala k…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sigiriya